वाह् सेक्स टोय :: Press Chautari ::
वाह् सेक्स टोय
कुनै समय थियो, जति बेला परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ढाल, प्यान्थर र पिल्सको बिज्ञापन सुन्दा र देख्दा जो कोही लाजले भुतुक्क हुन्थे । परिवार संगै भए लाजले टाउको निहँुरन्थ्यो । अश्लिल मानेर जिब्रो र ओठ टोक्नेहरु पनि धेरै हुन्थे । तर,अहिले त्यस्तो छैन् । समय बदलिएको छ । मनिसहरुका लागि त्यस्ता साधनहरु दैनिक उपभोग्य भएकाछन् । जो कोहिले पनि आफूलाई मन परेको त्यस्ता साधन छानीछानी किन्न पाउँछ । त्यस्ता साधनका पसलहरु पनि अलग्गै राखिएकाछन् । जुन ठाउँमा सस्तो देखि महंगो मूल्यका परिवार नियोजन र यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने महिला र पुरुषका कृतिम यौन खेलौना (सेक्स टोय ) हरु पाइन्छन् । राजधानीमा यस्ता पसलहरुको संख्या कम छ । तर, प्रयोगकर्ताहरुको संख्या भने बढ्दै गएको छ । न्युरोडको स्वीट सेक्रेट र सुनधाराको कण्डम हाउँसलाई राजधानीका प्रयोगकर्ताहरुको सेक्स टोयको मागलाई पूर्ति गर्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ । शंकर खनालको रिपोर्ट ।
म अहिले २७ बर्षकी भए । मेरो श्रीमान् संगितराज–३४ चाहि लण्डनमा छन् । उनी त्यहाँ पुगेको तीन पुरा पुगेर चार बर्ष टेक्यो । बिहे गरेको दुई बर्ष बित्न नपाउँदै लण्डन जानु प¥यो । उन्को योजना मलाई पनि उतै बोलाउने थियो । तर, त्यो प्रयास अहिलेसम्म सम्भव भएन् । त्यसैले अहिले म माईतिमै बस्छु । बेला– बेला फोन र अनलाईनमा गफ गर्छो । तर, उनी (श्रीमान्) को गफ गर्ने समय हामि दुबैका लागि छोटो हुन्छ । सोचे जस्तो गफ गर्ने समय मिल्दैन् । ललितपुर जावलाखेलकी श्रृजना बरालले अहिले भोगि रहेको कथा हो यो । न्यूरोड खिचापोखरीस्थित स्वीट सेक्रेट (यौन खेलौना) रहेको दोस्रो तल्लामा भेटीएकी उन्ले शुक्रबारसंगको भेटमा भनिन्–‘यौनका बारेमा लुकाउनु र लजाउनु पर्ने कुनै कारण छैन, श्रीमान् नहुँदाको निराशा, म यी नै पुरुष यौन खेलौनाबाट पूर्ति गर्छु ।’ किन भने यो युज गर्दा सन्तुष्टि मिल्छ । यौन प्यास मेटाउन सेक्स टोय काफी छ । यसका साथै सुरक्षा पनि छ यसमा । उन्लाई भाईब्रेट सेक्स टोयबाट सन्तुष्टि मिल्छ । उन्को बुझाईमा यौन कुण्ठा दबाउनु भनेको आफ्नो जीवनलाई पछेडि धकेल्नु हो । उन्का श्रीमान्लाई पनि यौन खेलौनाको बारेमा ज्ञान छ । उन्कै सल्लाहमा यो सम्भव भएको हो । त्यसमा हामि दुबै सहमत छौ । उन्ले भनिन् । त्यसो त स्वीट सेक्रेटमा अहिले महिला र पुरुष दुबैको यौन खेलौना रोजी– रोजी किन्न पाईन्छ । भर्खर यौवन उमेरमा फूल्दै गरेको उन्को जीवनमा श्रीमान् संगितराजको अनुपस्थिति निकै खड्कीयो रे । भन्छिन्–‘जोडि बेगरको जीवनको कल्पना गर्न अहँ सक्दै सकिन्न ।,उनीसंग श्रीमान्संगै २ बर्ष बिताएको मिठो अनुभूति छ । तर, त्यो अनुभूतिको पूर्ति अहिले उन्ले यस्तै यौन खेलौनाबाट गर्छिन् । सेक्सुयल रिलेसन पर पुरुषसंग राख्नु भनेको असुरक्षा निम्त्याउनु हो । त्यसैले सेक्स टोयको महत्व बेग्लै छ । भन्छिन् –‘हाम्रो पनि त मन छ नी हैन ,कुन बिबाहित केटीलाई आफ्नो श्रीमान्संग बस्ने चाहना नहोला र ? तर, व्यवहारमा सबैसंग सम्भव छैन् । यौनलाई प्राकृतिक आवश्यकताका रुपमा स्वीकारीसकेको अवस्थामा हाम्रो समाजमा कुण्ठाको रुपमा दबाइन्छ । जसले समाजमा बिभिन्न बितण्डा मच्चाएको उन्को बुझाई छ । उन्को भनाईमा लजाउने भन्दा पनि सुरक्षित यौन शिक्षाकोे बढी महत्व छ ।
स्वीट सेक्रेटमा आफ्ना साथिसंग यौन खेलौना च्वाईस गर्न पुगेकी रमिला कार्की (थर) परिर्वतन चाहि निकै लजाईन् । अहँ हुदैन, नलेख्नुस् । हामिलाई अप्ठ्यारो पर्छ । तर, उन्कै साथि पुनम गिरी भने खुल्छिन् । लेख्नुहोस, मेरा कुरा । तर, फोटो चाँहि नदिनु होला । मैले बिएड सकेकी छु । गाउँबाट कामकै खोजिमा काठमाडौ हानिए पनि काम पाउन सकिन । अहिले म राजधानीको एउटा डान्स बारमा काम गर्छु । म राम्रो नर्तकी पनि हुँ । यसो भन्दैमा म गलत छैन् । किन भने अरुको जस्तै त्यो पनि मेरो लागि पेशा हो । डान्स गर्ने भन्दैमा समाजमा नराम्रो दृष्टिभ्रम पर्छ । जसरी अहिले तपाँईले हामीमाथि प्रश्नको वाण रोप्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै समाजमा पनि यो केटीले के गर्छे भन्ने चियो र चासो हुन्छ । यस्तै पूर्वाग्रही समाज छ हाम्रो । लुकी–लुकी गलत र असुरक्षित ढंगले यौनसम्पर्क गर्नेहरुका लागि यौन खेलौना एउटा सामाधान हो । यसले आफ्नो सुरक्षा आफ्नै हातमा सुम्पिएको पनि छ । उनी यहाँबाट बज बन्नी भाईब्रेट (पुरुष यौन खेलौना) जुन पुरुषको लिङ्ग आकारको हुन्छ र सुरक्षाको लागि फिमेल कण्डम लान्छिन् । यसले मलाई जोडिबीच गरीने यौन कृयाकलाप भन्दा बढी सन्तुष्टि मिल्छ । भन्छिन्–यसले मेरो सुरक्षा म आफै गर्न सक्छु । उन्को बुझाइमा ड्रिङ्स गरेर होस गुमाउने पुरुषहरुबाट बच्न फिमेल कण्डम उपयोगि छ । पुरुष र महिलाले युज गर्ने सेक्स टोय एकै ठाउँमा पाईने भएपनि पुरुषसंग लजाउने भएकाले स्वीट सेक्रेटले यौन खेलौना किन्न युवतीहरुका लागि मात्र भनेर बुधबार खुल्ला गरेको छ । स्वीट सेक्रेटका प्रोपाईटर मनिष पौडेल भन्छन्– एक अर्कामा बिछोडिएका वा छुट्टीएका र श्रीमान् र श्रीमतीबाट यौन सन्तुष्टि नपाएकाहरुले बढी यौन खेलौना किन्छन् । त्यसमा पनि उनीहरु आफै आउनु पर्छ भन्ने छैन् । गोप्य रुपमा कन्ट्याक्टका भरमा घरको दैलासम्म पु¥याई दिने सुविधा हामिले मिलाएका छौ । ाझभ िका लागि धेरै प्रकारका पुरुष लिङ्ग आकारका यौन खेलौना बजारमा छन् । ती मध्य पेनीस डिजाईनका भ्राइबेटर,ाभिहष् खष्दचभत, ाझभ ितय ाझभ,ि दबवब दबललभ बढी प्रयोगमा छन् । यसलाई योनीको साईज अनुसार सानो, ठुलो, नरम र लचकदार बनाउन सकिन्छ । घरमा सजिलै सीरानी मुनी, बाकसमा र दराजमा लुकाउन मिल्ने खालका खेलौना पनि छन् । त्यस्तै पुरुष फूल बडि भएका पुरुष यौन अङ्ग भएका खेलौना पनि बजारमा छन् । पानीमा वा वाथरुमममा युज गर्दा सुरक्षित हुने वाटर प्रुफ खेलौना पनि छन् । तर, तीनको बजार मूल्य भने ३ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । यस्ता यौन खेलौनाहरु व्याट्रीबाट चल्छन् । यसबाहेक यौन कृयाकलापको सजिलोको लागि ाझभ िदभति,लेन्जरी सेक्सको लागि महिलाले युज गर्ने ड्रेस पनि छन् । जसले कामुकता दिन्छ । ती खेलौनाहरुले पूरुष झै आवाज निकाल्छन् । तर, यस्ता खेलौना अन्तराष्ट्रिय बजारमा २ लाख रुपैया सम्मका उपलब्ध छन् । जनु धेरै महंगो भएका कारण नेपालमा पाउन सकिदैन् ।
श्रृजना र पुनम त एउटा पात्र मात्र हुन् । उनिहरु जस्ता भर्खर बैश छिचोल्दै गरेका धेरै युवतीहरु यस्ता खेलौना प्रति जिज्ञासु छन् । ती मध्यकी कल्पना राई – २३ पनि एक हुन् । उनी अहिले राजधानीस्थित एक क्याम्पसमा बिबिएसमा अध्ययन गर्देछिन् । उनीसंग पनि कलेजका साथीसंग धेरै पटक स्वीट सेक्रेट छिरेको अनुभव छ । तर, किन्न चाहि हैन् । भन्छिन्– मेरा साथिहरु यौनको मामलामा उदार छन् । केटाहरुको बर्थ डे गिफ्ट र अन्य गिफ्टको लागि उनीहरु त्यहि पुग्ने गर्छन् । लजाउने त कुरै आउदैन । एक्लै हैन, हुलमा जान्छौ । त्यसैले त्यति वास्ता लाग्दैन् । अहिले युवतीहरु बर्थ डे, किरिङ, चक्लेट, ग्रे, स्टोभरी, बन्नना, बिभिन्न फलफूलको सुगन्धित बासनादार कण्डम किन्न रुचाउछन् । जसले रुमलाई नै बासनादार बनाउछ र पार्टनरलाइ उत्साहित पार्छ । त्यसमा पनि किरिङ कण्डम चाबी झुन्ड्याउन प्रयोग गरीन्छ । जुन गाडी र बाइकमा पर्सनलरुपमा प्रयोग गर्नसकिन्छ । यो सेफ सेक्सको लागि आफूसाथ राख्न सकिन्छ । अहिले १०®द्द मा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरुको सेक्स टोयमा आकर्षण बढेको छ । कलेज सकिनसाथ उनीहरु हुल बाधिएर यस्ता साधन किन्न हौसिन्छन् । यौन खेलौनाबारे रेश्मा गुरुङ्संग भने अरुको भन्दा छुट्टै अनुभव छ । उमेरले –४७ पुगे पनि उनी हेर्दा–३० बर्षकी जस्ती देखिन्थिन् । खाईलाग्दी र तन्दुरुस्त छन् उनी । भन्छिन्–मैले पनि श्रीमान्लाई छाडेर एक्लो जीवन बिताउन थालेको ठ्याक्कै १० बर्ष पुरा भयो । श्रीमान् कान्छीततिर लागेपछि उनी पनि एक्लीएकी हुन् । तर, एक्लो जीवन व्यतित गर्नुको मज्जा भने उन्का लागि बेग्लै छ । नारी पनि के कम पुरुषबाट सधै दबिनु पर्छ भन्ने त छैन नी हैन ? उनी पुरुष यौन खेलौना युज गर्ने नियमित ाझभ िहुन् । उनी मार्फत स्वीट सेक्रेटका आधा दर्जन कष्टुमर पनि बढेकाछन् । भन्छिन्–कृतिम पुरुष यौन खेलौना प्रयोग गर्नुको मज्जा नै बेग्लै छ । पुरुषप्रति निराशा पोख्छिन् उनी । फूसर्दीलो भएर सेक्स गर्न पाइने भएकाले पनि शहरदेखि गाउँसम्म यस्ता सेक्स टोयले बजार पाएको छ । दिउँसो फूर्सद छैन, प्राय राति नै यस्ता साधनको युज हुन्छ । कृतिम यौन खेलौनाबाट पनि प्राकृतिक खेलौना भन्दा बढी सन्तुष्टि लुट्न सकिने उन्को अनुभव छ । भन्छिन्–श्रीमान् पछि पर परुषसंग सम्बन्ध राखेकी छैन् । र आवश्यकता पनि छैन् । एक्लो साथि भन्नु हुन्छ की के भन्नुहुन्छ साथि भनेकै यहि हो मेरो ।
त्यसो त यौन खेलौना खेलाउनमा पुरुषहरु झनै माहिर छन् ? सेक्स टोय पसलमा ाझभ ियौन खेलौनाको छनौट गर्दे गरेको अवस्थामा भेटीए एक युवक । म काठमाडौंको रानीबारीमा बस्छु । ३६ पुगे अहिले । बिबाह गरेको छैन् । राजधानीको एक म्यानपावर कम्पनिमा काम गर्छु । दुई महिनामा एक पटक आउँछु । तलतल लागेको बेला यस्ता सेक्स टोय युज गर्न मन पर्छ । महंगो मूल्यका किन्न सकिदैन् । लामो छलफल पछि उनी आफ्नो कुरा भन्न यसरी राजी भए । तर, नाम चाहि नलेखिदिनु होला । फेरि सबै आफन्तले हेर्लान ? मलाई स्यानो भन्दा पनि फुल बडि भएको ाझभ िसेक्स टोय मनपर्छ । किन भने त्यसमा महिलाको शरिरमा अगाडिको यौनांगका अतिरिक्त नितम्ब खेलाउन मिल्छ । यौन सम्बन्धका बेला टङ किसका लागि प्लेस लाईट अर्थात मुखकै आकारका यौन खेलौना पनि उनी युज गर्छन् । त्यसको यौन मज्जा बिछट्टकै हुन्छ । तर, यसो भन्दैमा सेक्स टोय दैनिक रुपमा युज गर्ने चाहि हैनन् उनी । भन्छन्–मलाई मास्टर बेड कप भाइब्रेट मन पर्छ । ाझभ िखेलौनामा mभ िले युज गर्नेमा लिटिल बडि, जापानीज गर्ल, फुल बडि ओम्यान, भेजिनालगायत छन् । यो बाहेक उनी नयाँ भाईब्रेट कण्डम किन्न रुचाउँछन् । बजारमा मेडिकेटेड कण्डम यिलन यिखभ कण्डम बढी जान्छ । किन भने यसले लामो समयसम्म यौनसम्पर्कमा साथ दिन्छ । बजारमा डल्फीन स्टायल,युयोटीभ बडी,एप्पल कण्डमछन् । हल्याण्डको दबकष्अ अयलमयm, इन्डियाको चष्ददभम तथउभ अयलमयm,ताईवानको मगचभह भहअष्तब ,यपबmयतय अचयधल अयलमयm छन् । त्यस्तै काठमाडौंका रुद्र श्रेष्ठ, ४० पनि ाझभ िखेलौनामा रुचि राख्छन् । उनीचाहिँ सेक्स टोय भन्दा पनि नयाँ –नयाँ कण्डम किन्न रुचाउँछन् । मलाई सेक्स टोय भन्दा पनि कण्डममा बढी रुचि छ । जस्ले यौन जोडिसंगको कृयाकलापमा सन्तुष्टि दियोस् । उन्लाई ओकामोटोको कण्डम ब्राण्ड मन पर्छ । शंखमुलका रमेश तुफान –२६ पनि सेक्स टोयका पारखि हुन् । भन्छन्– सिंगल तथा डबल भाइब्रेसनमा मलाई बढी रुचि लाग्छ । पहिले दैनिक हस्तमैथुन हुन्थ्यो, तर, अहिले गर्नु परेको छैन् । भाइब्रेसनले यौन सम्बन्धलाई रोमाञ्चक बनाउँछ । न्याकेड डलमा ब्याट्री राखिएकाले यसले बिभिन्न स्वरुपमा शरिर रोटेशन गर्नुका साथै उत्तेजनामा रहेका महिलाको झै आवाज पनि निकाल्छ । यसो गर्दा सन्तुष्टि मिल्छ । तर, सेक्स टोयले अहिले फेशनको रुप पनि लिदै छ । त्यसमा पनि टीनएजका युवायवती यस्ता साधन प्रति बढी आकर्षित छन् ।
पोखरास्थित स्वीट सेक्रेटकी बजार व्यवस्थापक मिलन गिरी भन्छिन्–म महिलाका लागि चाहिने सेक्स टोय घर सम्म पु¥याउने काम गर्छु । पुरुषसंग महिला खुलेर कुरा गर्न नसक्ने भएकाले महिलाहरु म मार्फत कन्ट्याक्ट गर्छन् । उनीहरुले भनेको ठाउँसम्म सेक्स टोय पु¥याई दिने काम मेरो हो । उन्को अनुभवमा सेक्स टोय युज गर्नेमा बिबाहित महिला बढी छन् । जो श्रीमान्बाट टाढा छन् उनीहरुले आफ्नो यौन प्यास मेटाउन यस्ता साधन युज गर्छन् । महिलाहरुका लागि ५ देखि १० इन्चसम्मका पुरुष लिङ्ग छन् । जसले अत्याधिक उत्तेजना गराउने र प्रयोगमा पनि साथ दिन्छ । पुरुष लिङ्गमा भाईब्रेट भएकाले अत्याधिक सन्तुष्टि दिन्छ । भन्छिन्–पुरुष कृत्रिम लिंगमा स्पाइनी भाईब्रेट लिंग अर्थात जता फोल्ड गर्न पनि मिल्ने पुरुष लिंग बढी बिक्रिमाछन् । पुरुषको फुल बडी भएको यौन खेलौनाबाट महिलाले बढी सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने गरेकाछन् । तर, धेरै महिला यस्ता साधन बारे खुलेर कुरा गर्न हिच्किचाउछन् । उनीहरुसबै साथिहरु मार्फत कन्ट्याक्टमा आउनेहुन् । तर, अहिले यो संख्या बढेको छ । बुझ्नकै लागि पनि महिलाहरु सेक्स टोय पसलमा पस्छन् ।
खिचापोखरीस्थित स्वीट सेक्रेटका मनिष पौडेल भन्छन्–उपभोक्ताले बजारमा दाल, साग, फलफूल छानी–छानी लिए जस्तै सेक्स टोय पनि छानी–छानी रोजाईमा किन्न पाउँछन् । महिलाहरुले पुरुष लिङ्ग र पुरुषले महिलाको योनी भएको यौन खेलौना किन्छन् । यौन कृयाकलापबाट आफूलाई कसरी सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराम उपभोक्ता सचेत छन् । महिलाका लागि ३० प्रकारका पुरुष कृत्रिम यौनाङ्ग बिक्रिमा छन् । रेगुलर सेक्सबाट दिक्क भएकाहरुलाई नयाँपन खोज्ने क्रममा पुरुष सेक्स टोयले साथ दिन्छ । अर्कोतर्फ हार्नेस अर्थात पेटीसमेत भएको पुरुष लिंङ्ग महिलाले बाधेर अर्को महिलालाई सेक्स गर्न पनि उपयोगि छ । लेस्वियन अर्थात महिला–महिलाबीचको यौन सम्बन्धका लागि पनि यो उपयोगि साधन हो । त्यसै गरी पुरुष लिङ्गलाई पम्प दिएर ठूलो र कडा बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा साईज मेन्टेन गरेर महिलाले यौन सन्तुष्टि पाउन सक्छन् । पुरुष लिङ्गको साहयतामा महिलाले पुरुषसंगै सेक्स गरेको अनुभूति यसमा हुन्छ । स्वीट सेक्रेटमा पुरुषलाई चाहिने २८ प्रकारका महिला कृत्रिम यौनाङ्ग छन् । जसमा डबल भेजिना भएका खेलौना पनि छन् । अधिकांश ब्याट्रीबाट चल्ने भएकाले भाईब्रेटयुक्त छन् । जुन महिलाको योनीमा पुगेपछि चरम सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । यहाँ पाईने ९५ प्रतिशत महिला कृत्रिम यौनाङ्गमा भाईब्रेसन छ । युवाहरुका लागि भने सुरक्षित कण्डमको अवधारणा ल्याइएको छ । रातको समयमा चम्किने नाइट ग्लो कण्डम, किरिङसहितको कण्डम, क्रिस्टल कण्डम मात्र हैन, एप्पल, जिन्स, लभ, इलाइट, प्लेजर बिशेषता भएका कण्डम पनि उपलब्धछन् । उनी भन्छन्– प्राकृतिक यौन सम्र्पक आकांक्षा बमोजिम चरम सुख नपाएकाहरुले यस प्रकारका सहयोगि साधन तथा कृत्रिम योनाङ्गबाट सन्तुष्टी प्राप्त गर्छन् । यस्ता साधनहरु कतार, दुबै, कोरीया, ओमान, मलेसीयालगायत मुलुक पुगेकाहरुले यौन सामाग्रि किन्न आफ्ना श्रीमतिलाई पैसा पठाई दिने गर्छन् । त्यसमा हामिले घरघरमा पु¥याई दिन्छौं । यी सबै कन्ट्याक्टमा गर्छो । यसले गर्दा नेपाली समाज बिस्तारै सेक्स टोयको बारे उदार बन्दै गएको देखिन्छ ।
बुधवार, २०७० आश्विन ०२ गते २३:४२ / Wednesday, Sep 18, 2013 11:42 pm